AC Filter Capacitor Vagadziri uye Vatengesi - China AC AC Filter Capacitor Factory
Yepamberi yakamisikidzwa pcb capacitor yakagadzirirwa sisitimu yepamusoro
Iyo AKMJ-PS akateedzana akagadzirwa nepini terminal, kukwira pane PCB pabhodhi. Inoshandiswa zvakanyanya musimba zvigadzirwa zvemagetsi zvinoshandiswa AC firita.
Nyowani AC firita capacitor yeshanduro yemazuva ano uye yePSPS
CRE inogadzira akasiyana mafirimu dielectric capacitor - kubva pakakwirira simba capacitor mhinduro yeindasitiri neyemotokari indasitiri, kune yakakwira simba firimu ma capacitor akakodzera kune ese emagetsi mashandisirwo emagetsi pamusoro penzvimbo yemagetsi inotenderera 100V volts kusvika ku100 kV.
Yakanaka mhando AC firimu simba capacitor
1: Mylar tepi pasuru, Yakavharwa ne resin;
2: Mhangura yemhangura inotungamira, saizi diki, kuiswa kuri nyore;
3: Yakakura kugona, diki saizi;
4: Kuramba kune yakakwira voltage, nekuzviporesa-pachako;
5: Yakakwira ripple yazvino, yakakwira dv / dt inomira kugona.
Yakadzika-inductance AC capacitor yeakakwira simba traction mota drive inverters
Iyi AKMJ-S yakateedzana capacitor inoshandiswa kutora uye kuchengetedza simba kana AC simba rakakwira kupfuura izvo zvinodiwa nemutoro weDC, uye kupa simba kumutoro kana simba re AC radzikira pane izvo zvinodiwa.
Yakagadzirwa nesimbi firimu capacitor ye AC kusefa
Firimu capacitor yeA AC kusefa neYako-yekuporesa maitiro, akakosha esimbi maratidziro anovimbisa yakaderera kurasika inductance uye zvichidaro zvakanyanya kwazvo kuvimbika.
Yakakwira voltage AC firimu capacitor ine waya inotungamira
AC firimu capacitor AKMJ-PS
1. Dhizaini yekugadzira
2. Nyaya yakasimba
3. Yakakwira mhando AC firimu capacitor nemutengo wakanaka
Yakasarudzika-yakagadzirirwa AC firimu capacitor
Matatu matatu AC firita capacitor, AKMJ-S,
Iyo yekuzvirapa-yakaoma, yakaoma-mhando, capacitor zvinhu zvinogadzirwa uchishandisa zvakanyatso profiles, wave yakatemwa metallized PP firimu / PU iyo inovimbisa yakaderera yekuzvidzora inductance, yakakwira kuputika kuramba uye yakakwirira kuvimbika. Iyo yepamusoro capacitor yakavharidzirwa neyekudzima-yega eco-hushamwari epoxy. Dhizaini yakasarudzika inovimbisa yakaderera kwazvo self inductance. CRE's AC firita capacitor inozivikanwa mukushandisa njanji, tridhi yemagetsi, masimba emhando yepamusoro, uye mashandisiro eUPS.
Yakaomeswa mhando yakaomeswa firimu AC capacitor ine cylinderical chimiro
AC firita capacitor (AKMJ-MC)
CRE yakagadzira yakaoma mhando firimu AC firita capacitor iyo inogona kuramba yakakwira voltage ine yekuzvirapa-inokwanisa capabilty. AC firita capacitors yakanyatsogadzirirwa AC wedunhu. Iyo inozivikanwa inoshandiswa musimba zvigadzirwa zvemagetsi, yakakwira-simba UPS, inverters etc.
Yakavimbika Inodzorwa Yega Kuporesa AC AC firita capacitor